Best audio taariikhqorihii: audio Record fudayd
> Resource > Video > Sidee loo Diiwaan Audio la Best taariikhqorihii Audio
"Hey guys u guys i siin karaa soo jeedin kasta oo software wanaagsan diiwaan dhawaajiyaan ugu fiican oo aad edit karaa codka sidoo kale .... mahad, minty"
Ma waxaad sidoo kale baadi agagaarka u software duubo wanaagsan audio sida Minty? Waxaa laga yaabaa in aad dooneysid in aad u qoraan audio ka websites music caanka ah sida Spotify ama xataa websites video qaar ka mid ah. Halkan waa barnaamij wanaagsan oo kaa caawinaya in aad hal mar oo dhan hareer dhibaatadan. Streaming Audio taariikhqorihii , ee taariikhqorihii ugu fiican audio, waxaad siinaysaa awood u leh inay u qoraan audio wax ka websites. Waxa kale oo aad edit karaa macluumaadka ku saabsan maqal ah lagu duubay oo waxaad ka samaysaa giraan codadka. Bal aan fiirino gacanta ku sida loo isticmaalo hoos ku ah.
1 Ku rakib ugu fiican software duubista
Marka hore bal aynu diyaar u hesho. Download barnaamijkan iyo rakibi on your computer. Yaabaa in aad dareentay in uu leeyahay laba nooc. Dooro mid ka mid sax ah si aad u computer.
2 audio Record aan khasaaro tayo leh
Fur barnaamijka iyo riix badhanka Record ee geeska bidixda ah ee kore. Markaas raadiyo audio on websites. Waxaan Spotify qaadan doonaa sida tusaale. Fur hees ku Spotify inuu u ciyaaro iyo barnaamijka bilaabi doonaa qoro isla markiiba.
Waad haysan kartaa ciyaaro playlist oo dhan ku Spotify, halka barnaamijka ku qori karta liiska oo dhan iyo kala jabeen song walba sidii markii aamusnaan dhexeeya.
Fiiro gaar ah: mid wax ku xuso waa in ay tahay in aad sii xiriir ah internet siman si ay u qoraan ah file maqal ah oo dhamaystiran.
3 Transfer qalabka la qaadi karo, waayo, loo maqli karo (optional)
Waa mid aad u fudud si ay u gudbiyaan audio qalabka la qaadi karo barnaamijkan. Dooro heeso aad rabto in lagu wareejiyo oo guji badhanka dar Lugood in. Waxaa lagu ogaaday in aad in heesaha oo waxaa lagu dari doonaa Lugood iyo aad ka heli kartaa playlist SAR ah. Markaasay aad u hagaagsan kartaa qalabka Apple aad sida iPod.
Ka sokow qalabka Apple, aad rabto in aad si ay u gudbiyaan si kale ciyaartoyda MP3. Just xaq-riix audio iyo dooro Open ee Folder si aad u ogaato meesha audio duubay ayaa la badbaadiyey. Markaas jiidi faylka si MP3 ciyaaryahan aad gacanta.
Kale oo ka bixinta adeeg duubista ugu fiican, waxa kale oo aad isticmaali kartaa barnaamijka si uu u sameeyo giraan codadka. Riix icon dawan iyo bitmap ah audio muuqan doonaa. Dooro qayb kasta ee bitmap iyo badbaadin telefoonada aad. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel xogta ku saabsan audio ah, waxaad xaq u-riixi kartaa audio iyo dooran View Detail. Markaasuu ku qor in macluumaad kasta oo door bidayo in pop-up khaanadda saxda ah. Waxay u egtahay jiidasho leh, soo maaha? Just download it in ay naftaada isku dayaan.